Mpanamboatra sy mpamatsy jiro UV germicidal China UV jiro germicidal Factory
Fandraisana an-tanana hopitaly ...
Famolavolana vaovao 35W UV mamono otrikaretina ...
36W Zavakanto Alemà ...
Jiro ultraviolet azo entina mikraoba mandrehitra ozona
Ny jiro famonoana ozonona ultraviolet miaraka amin'ny UV 253.7nm dia afaka manafoana ny viriosy (Covid-19) eo noho eo, afaka manafoana ny bakteria sy ny totoka, azo antoka sy mety, mitondra fiainana salama ho anao.
35W UVC Ozone Ultraviolet Germicidal Lamp Jiro Quartz
Izahay Kanfur dia manao jiro UVC ho an'ny efitrano lehibe sy efitrano kely ary toerana ambonimbony. Miaina fiainana miaraka amin'ny fifehezana ny fahadiovana. Vokatra UVC germicidal ho an'ny olona sy ny orinasa.
Famonoana hopitaly jiro ultraviolet
36W / 60W UVC jiro Ozone miaraka amin'ny fanaraha-maso lavitra avy any Kanfur dia mety mamono bakteria, virus, bitika, afaka mameno ny fepetra takiana amin'ny fanaovana sterilization sy famonoana otrikaretina amin'ny fiainana andavanandro ary miaro ny fahasalamanao mianakavy.
36W / 60W jiro famonoana UV miaraka amin'ny fanaraha-maso lavitra tsy misy tariby
110 V / 220 UV famonoan-jiro UV fanaraha-maso tsy misy tariby amin'ny alàlan'ny rindrina, fotoana fanamoriana fahatelo, fanemorana 15 segondra manomboka miaro ny vatanao. Jiro famonoana ozon UV ozon, fanamorana ny tontolo iainana, aza manalavitra ny viriosy sy bakteria.
Ny jiro manaparitaka ultraviolet dia afaka manafoana ny bakteria, virus ary mites, be mpampiasa ao an-trano, sekoly, hopitaly, hotely, izay mitana andraikitra lehibe amin'ny famonoana otrikaretina amin'ny fiainantsika andavanandro.
36W Jiro famonoana otrikaina uvc azo zahana uvc 36W
Ny jiro famonoana UVC dia manampy amin'ny famonoana bakteria, viriosy, tsiranoka ary bobongolo amin'ny fomba mahomby. Fomba fanadiovana tsy misy simika io izay mamono otrikaina amin'ny 360 ° hanampiana ny famoronana tontolo iainana azo antoka kokoa.
110V / 220V germicidal uv light avy any Kanfur dia mamela ny tara-masoandro hiditra ao amin'ny efitrano, miaraka amin'ny asan'ny desinfection, sterilization ary mites mites, mitondra anao tontolo iainana salama.
Volavola vaovao 35W UV famonoana jiro ho an'ny fanamafisam-peo ao anaty
Izahay Kanfur dia namolavola jiro famonoana UV vaovao 35w vaovao, miaraka amin'ny fonosana alimo Aluminium, akorandriaka ABS, UV ary famafana ozona indroa ozone, mamorona tontolo iainana mahasalama.
Jiro hopitaly azo entina amin'ny hopitaly
35W jiro UV sterilizing azo entina, UV mahery ary Ozone mitambatra
manadio ny rivotra sy ny habakabaka ao anaty efitrano ao an-trano na eo amin'ny sehatry ny asa.